बच्चा तान्दै हातमा जुस बोकी रुदै पुन्य भेट्न पुगिन् हिमा ! पुण्यको अवस्था ना*जुक बन्दै (हेर्नुस् भिडियो) – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /भिडियो/बच्चा तान्दै हातमा जुस बोकी रुदै पुन्य भेट्न पुगिन् हिमा ! पुण्यको अवस्था ना*जुक बन्दै (हेर्नुस् भिडियो)
बच्चा तान्दै हातमा जुस बोकी रुदै पुन्य भेट्न पुगिन् हिमा ! पुण्यको अवस्था ना*जुक बन्दै (हेर्नुस् भिडियो)
उनी त्यसरी अन्तर्वार्ता दिँदा दिंदै मिडियाकर्मीकै अगाडी ढलेपछि उनलाई आकस्मिक रुपमा विर अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । पिडित र संधै न्यायको पक्षमा वकालत गर्ने पुण्यमाथि लागेको आरोपलाई लिएर हिमा श्रेष्ठले बोलेकी छिन् । बच्चा तान्दै हातमा जुस बोकी रुँदै पुन्य भेट्न पुगेकी हिमाले अर्का अभियन्ता बिनय जंग बस्नेतले लगाएको निराधार आरोपप्रति आपत्ति जनाएकी छिन् । बाँकी कुराकानी भिडियोमा हेर्नुस् :
पछिल्लो पटक दाना र चल्लाको भाउमा अत्यधिक रूपमा कालोबजारी भएको छ । चल्ला र दानाको मूल्य निर्धारणमा उद्योगीको एकलौटी अधिकार भएकाले यसको कालोबजारी भएको हो । कुखुरापालक किसानले दाना, चल्ला र कुखुराको मूल्य निर्धारण गर्ने अधिकार पोल्ट्री व्यवसायीको हातमा भएकाले यसको फाइदा उठाउँदै उनीहरूले बजारमा कार्टेलिङ गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन । राष्ट्रिय कुखुरा पालक किसान सङ्घर्ष समितिका संयोजक विष्णु खड्काले पछिल्लो दुई महिनामा चल्ला र दानामा मूल्यमा सहनै नसक्ने गरी कार्टेलिङ भएको आरोप लगाए।
उनका अनुसार अहिले प्रतिक्विन्टल दानाको मूल्य तीन हजार ६०० रुपियाँ रहेको छ । पछिल्लो एक वर्षमा दानाको मूल्यमा ८५० रुपियाँ बढेको छ । सो अवधिमा प्रतिचल्ला ३० रुपियाँ पाइने गरेकोमा अहिले बढेर प्रतिचल्ला ७० रुपियाँ पुगेको छ । यसको बजार केही व्यापारीहरूमा नियन्त्रित र बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेकाले यो समस्या आएको भन्दै अध्यक्ष खड्काले भने, “बजार अनुगमन गरेर कारबाही गर्नुपर्‍यो नि खै अनुगमन । ” सरकारको काम उद्योगीले नाफा खाएको र किसानले घाटा खाएको साँछी बस्नेबाहेक अन्य कुनै काम नभएको उनको आ रोप छ ।
बिरामी श्रीमतीलाई अस्पतालको बेडमै छोडी श्रीमान फ*रार ! श्रीमानलाई दिईन अन्तिम संदेश (भिडियो सहित)